တောင်သမန်သားလေး: ♪ 1MB ကို 1ကျပ်ဖြင့် နေ့စဉ်သုံး အပတ်စဉ်သုံး အစီအစဉ်ဖြင့် Ooredoo Pormortion ပေးပြီ ♫
♪ 1MB ကို 1ကျပ်ဖြင့် နေ့စဉ်သုံး အပတ်စဉ်သုံး အစီအစဉ်ဖြင့် Ooredoo Pormortion ပေးပြီ ♫
Facebook Pack တွေ အပြိုင်အဆိုင်ပေးနေကြလို့ ရွေးရခက်နေပြီလား?
Facebook မှာ ဓာတ်ပုံတွေ Video တွေကြည့်မရလို့ရော စိတ်ညစ်နေပြီလား ?
ဒါဆိုရင်တော့ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့အူရီဒူး Facebook Plus အစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ Facebook Plus ကို ပိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
Facebook Plus မှာနေ့စဉ်သုံးနဲ့ အပတ်စဉ်သုံး အစီအစဉ် ၂ မျိုးရှိပြီး နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် 1MB ကို ၁ ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကောင်းပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာလာတဲ့ Facebook Plus ကိုရယူပြီး ဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြည်၊ ပုံတွေပဲတင်တင်၊ ချက်တင်ပဲလုပ်လုပ် Facebook ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ကြိုက်သလိုသုံးနိုင်ပြီပေါ့။
နေ့စဉ်သုံး Facebook Plus အစီအစဉ်ကတော့ ၁၉၉ ကျပ်ထဲနဲ့ Facebook သုံးအင်တာနက် 200MB ကိုရယူပြီး ကိုယ်အသုံးပြုသလောက်ကို အဲဒီ 200MB မှဖြတ်တောက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကတော့ ၀ယ်ယူသည့်နေ့ရဲ့ ညသန်းခေါင်ယံ ၁၂ နာရီအထိအဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံး Facebook Plus ကို *4441# ကိုခေါ်ဆိုပြီး ဝယ်ယူနိုင်သလို 4441 သို့ ‘’FB1’’ လို့ SMS ပို့ပြီးတော့လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အပတ်စဉ်သုံး Facebook Plus အစီအစဉ်ကတော့ ၉၉၉ ကျပ်ထဲနဲ့ Facebook သုံးအင်တာနက် 1000MB ကိုရယူပြီး ကိုယ်အသုံးပြုသလောက်ကို အဲဒီ 1000MB မှဖြတ်တောက် ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကတော့ ဝယ်ယူတဲ့ရက်ကနေ ၇ ရက်အထိဖြစ်ပါတယ်။ အပတ်စဉ်သုံး Facebook Plus ကို *4442# ကိုခေါ်ဆိုပြီး ဝယ်ယူနိုင်သလို 4442 သို့ ‘’FB7’’ လို့ SMS ပို့ပြီးတော့လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Facebook Plus အစီအစဉ်ကို စာရင်းသွင်းရယူထားပြီးသားသူများကတော့ အူရီဒူးအချင်းချင်း အခမဲ့ ခေါ်ဆိုခွင့်ရယ် အခြားအော်ပရေတာ တွေဆီကို တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့ အသက်သာဆုံးခေါ်ဆိုနိုင်တာရယ် ၂ မျိုးစလုံး ကိုတစ်ပေါင်းတည်း ရရှိမှာဖြစ်လို့ သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ … အခုပဲ အထူး Facebook Plus ကိုဝယ်ယူပြီး Facebook တစ်ဝကြီးသုံးကြရအောင်
အသေးစိတ်ကို http://ore.do/1UDDhp8 တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
Credit to ==> Ooredoo Myanmar
Posted by lin linn at 2:34 AM
ဇူလိုင်လမှာMI MAX3ကိုမိတ်ဆက်မယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့ CEO LEI JUN